Madaxweynaha Puntland oo Socdaal gaara ku tegay magaalada Kismaayo iyo Warar sheegaya in Siciid Deni... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni ayaa socdaal gaara galabta ku tegay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland.
Siciid Deni waxaa garoonka magaalada Kismaayo kusoo dhoweeyay madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, waxaana wafdiga ka mid ahaa wasiiro iyo mas’uuliyiin ka tirsan dowlad Goboleedka Puntland.
Safarka Madaxweynaha Puntland ayaa las heegay inuu maalmo qaadan doono, isagoo kulamo la yeelan doona madaxda Jubaland, waxaana looga hadli doonaa xaaladda dalka kaalinta Doorashada dalka.
Waxaa jira warar sheegaya in Siciid C/llaahi Deni uu ku jiro damac ah inuu noqdo musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Previous articleC/raxman C/shakur oo u jawaabay Farmaajo. “Dalkan waxaa ragaadiyey keligii Waddani iyo keligii Islaam…”
Next articleMas’uul ka tirsan Dowladda Mareykanka oo xaqiijiyey in Askar Soomaali ah ay Eritrea u qaaday Itoobiya